Maitiro ekuona Netflix paRaspberry Pi | Mahara emahara
Raspberry Pi inoshanda kune vakawanda se minipc kana komputa yekubatsira. Asi vanozvidzivirira vanogara vachitaura kuti haisi michina ine simba yakakwana yekuita kwakakosha mashandiro. Pano isu tichaenda kukuudza iwe kuti iwe ungaite sei nemabasa kana ine simba software.
Muchidzidzo ichi tichaenda kukuudza maitiro ekuona nekushandisa Netflix, pamwe nemamwe masevhisi ekushambadzira ayo anokwikwidza zvakananga neNetflix, pane yedu Raspberry Pi pasina kushandisa chero chekunze Hardware kana kushandisa rasipibheri bhodhi semupenzi mutengi (zvakanaka, imwe nzira kana iyo inoshandisa yakapusa mutengi mashandiro kuva neNetflix paRaspberry Pi), yatisingade chaiyo Raspberry Pi bhodhi asi chero imwe Hardware inogona kubatanidzwa kuchiratidziri.
Netflix ibasa rinozivikanwa kwazvo rewebhu nekuda kwezviri mukati maro uye mutengo wayo / chiyero chehunhu, asi isu tinofanirwa zvakare kutaura kuti inodzivirira uye inoda apo inoshandiswa pamapuratifomu akasiyana. Yayo nhare mbozha haigone kuiswa pamafoni efoni kana mapiritsi ane midzi uye muGnu / Linux kushanda kwayo kwepamutemo hakugone kushandiswa nekuda kwemamwe maraibhurari asipo.
Pane nzira dzinoverengeka dzekutora Raspberry Pi yekutamba zvemukati kubva kuNetflix kana dzimwe nzira dzakafanana.
Asi kutanga ngatione iyo rondedzero yezvinhu uye / kana zvishongedzo izvo isu zvatichazoda kuita kuti Raspberry Pi ishande nemazvo kwete chete paLCD yekutarisa asiwo paterevhizheni yekumba kana chimwewo chinhu chakafanana.
Kune izvi isu tinoda zvinotevera:
32 Gb kana kupfuura Kirasi 10 Microsd kadhi
Microusb tambo uye chaja.
HDMI tambo (S-vhidhiyo mune yayo default).
Raspberry Pi 3 bhodhi.
Wireless khibhodi uye mbeva.
Indaneti (Kana iri wired, isu tinoda tambo yeethernet)
Raspbian ISO mufananidzo.
1 Maitiro 1: kushandisa Firefox
2 Maitiro 2: kushandisa Chrome uye ExaGear
3 Maitiro 3: Chromium yeNetflix
4 Maitiro 4: Kodi Wedzera-on
5 Maitiro 5: mbeveve Mutengi
6 Mamwe masevhisi
Maitiro 1: kushandisa Firefox
Shanduro nyowani dze Mozilla Firefox inobvumira kushandiswa kweNetflix web application. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa chete kuzviisa paRaspbian tichishandisa rairo:
Izvi zvichaisa yazvino vhezheni yewebhu browser uye inobvumidza kushandiswa kweNetflix pane yedu Raspberry Pi. Iyi nzira ndiyo yakapusa uye yakapusa pane dzese dziripo dzeNetflix. Kune vazhinji sarudzo yakanakisa asi ichokwadiwo kuti kana tichida Chrome, iri idambudziko, dambudziko hombe nekuti havasi mabhurawuza akafanana, kure nazvo. Imwe nzira ndeyekuisa yazvino vhezheni yeMozilla Firefox kubva kumahofisi eMozilla epamutemo. Kuti tiite izvi tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Maitiro 2: kushandisa Chrome uye ExaGear
Iyo ExaGear kambani yakagadzira software ku mhanya x86 mapuratifomu ekushandisa pamapuratifomu senge Raspberry Pi. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuisa nekumhanya nayo. Ipapo isu tinogona kushandisa Chrome yeWindows seye default browser kuona Netflix mafirimu uye akateedzana.
Tinogona kuwana iyo ExaGear software kuburikidza Iyi link. Kana tangowana, isu tinosunungura pasuru uye tinomhanyisa iyo yekumisikidza faira seinotevera:
Zvino isu tinofanirwa kuzviita seinotevera:
Uye isu tinogadziridza software kuti ive nemabhugi mashoma sezvinobvira:
Iye zvino tinogona kushandisa Chromium neNetflix kana kungoenda ku Google Chrome webhu uye dhawunirodha iyo yekumisikidza deb package.
Maitiro 3: Chromium yeNetflix
Kunyangwe Chrome neChromium zvichitanga kubva kuchirongwa chimwe chete, hadzisi chinhu chimwe chete, saka vashandisi vazhinji vanoona Netflix paChannel kwete paChromium. Sezvo nemamwe akawanda mabhurawuza seEpiphany, dambudziko riri mumaraibhurari ebrowser uye kushandiswa kwezvinhu zvine DRM. Asi pane nzira inogadzirisa dambudziko iri muChromium uye ine zvinotevera.
Kutanga isu tinofanirwa kurodha yazvino vhezheni yeChromium yeRaspbian, tinoita izvi nekutaipa zvinotevera mune terminal:
Zvino zvatava neiyi vhezheni vhezheni yeCromium yakaiswa, isu tinofanirwa kuwedzera chakakosha uye chinonakidza chishandiso chemapuratifomu akaita seRaspberry Pi: Bhurawuza Agent customizer. Iyi plugin inotibvumidza isu kuti tichinje ruzivo urwo webhu bhurawuza rinotumira kune ewebhu masevhisi uye kunyorera Iyo plugin yeiyi browser inowanikwa pano. Kana tangove nezvose, isu tinofanirwa kushandura mumiririri kana kugadzira iyo nyowani mumiriri uye nekuwedzera inotevera data.
Iye zvino isu tinosarudza ino Mumiriri uye tobva tatakura peji yeNetflix. Ipapo sevhisi ichashanda nekutamba chero vhidhiyo isina zvinoenderana nyaya
Maitiro 4: Kodi Wedzera-on
Muzvinhu zvatataura pamusoro apa, iyo Raspbian ISO mufananidzo wakakumbirwa kuisa pane microsd kadhi. Zvisinei, izvi tinogona chinja kune vhezheni yeKare yeRaspberry Pi.
Kodi chirongwa chinoshandura yedu Raspberry Pi kuita media media, nzvimbo yemultimedia iyo yatinogona kushandisa paterevhizheni muimba yekutandarira kana yekurara, kuita iyi smart-tv.
Netflix kazhinji haina kutsigirwa neKare, sezvo Netflix iri webhu app uye inoda kunyoreswa uye kiyi yekushanda. Asi Nharaunda yakagadzira inowedzera-on yeKo inoita kuti zvikwanise kushandisa Netflix paRaspberry Pi. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kutora iyo yekuwedzera-on ino Github repository uye isai paIti seimwezve system yekuwedzera-on. Mushure meizvozvo nzira yekuenda kuNetflix ichaonekwa.
Maitiro 5: mbeveve Mutengi
Munyaya yese yenyaya yatataura nezvake uye chokwadi ndechekuti ichiri sarudzo inoshanda kune vazhinji vashandisi. Raspberry Pi inotibvumidza kuti tishande pamwe mbeveve mutengi system, izvi zvinoreva izvozvo tinogona kutamba zviri muNetflix kana kunyorera kweNetflix kubva kuseva uye kuitarisa kuburikidza neRaspberry Pi yedu kure. Kune izvi isu tinoshandisa chirongwa chinonyanya kubatsira: TeamViewer.
TeamViewer chirongwa chinotibvumidza kuti tibatanidze kune chero komputa ine iyi application, pasina kudiwa kwekugadziriswa kukuru kana chero chinhu chakafanana netiweki maneja. Mune ino kesi isu tinofanirwa kubatana nekombuta ine Windows Chrome kana Microsoft Edge uye TeamViewer, ipapo isu tichagadzirisa desktop iri kure kubva kune Raspberry yedu Pi. Iyi nzira ndiyo inorema pane yedu Raspberry Pi uye kunyangwe, nekuda kwesimba rakaderera reiyo rasipibheri bhodhi, inogona kunge iri iine matambudziko ekuridza zvakanyanya.
Iye zvino kune mamwe masevhisi anoenderana neRaspberry yedu: zvese zvese. Maitiro anoteverwa neNetflix kupa zvinoonekwa kune vatengi vayo anoshandiswa nevakawanda vanokwikwidza, ndiko kuti, kuvhurwa kweapp yega kana webhu kunyorera. Uye iri mune yekupedzisira uko iyo inopesana neiyo Raspberry Pi. Muchidimbu, tichishandisa chero nzira dzatinogona kuita Raspberry Pi kutamba chero imwe inokwikwidza yeNetflix sevhizheni seRakuten TV, Amazon Prime kana HBO.
Idzi nzira ndidzo dzinonyanya kushanda kana zvasvika pakutarisa Netflix kana chero imwe nzira. Ini pachangu ndinoda sarudzo yeMozilla Firefox kana, zvikakundikana izvo, kushandiswa kweKo, nzira mbiri dzinodya zviwanikwa zvishoma uye dzinogona kuita kuti tiwane nguva dzakanaka neaya masevhisi epamhepo, imwe yechokwadi uye inonakidza imwe kupfuura terevhizheni yekare nezviziviso zvayo. Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Maitiro ekuona Netflix paRaspberry Pi
Mhoroi ndakaedza kumisikidza Chromium neiyo yekuwedzera, asi ndinofunga kuti mwedzi wapfuura Netflix yakachinja kuenderana kwayo uye haindibvumidze kuti ndione Netflix paRaspberryPi3 yangu, kusvikira mwedzi wapfuura ndaigona kuona Netflix pasina matambudziko neChromium neNetflix. Launcher.
Ini ndinofunga Netflix yakachinja chimwe chinhu, imwe shanduko inogona kuitwa mukomputa kuti iko zvino ive inowirirana, ini chaizvo kubva kuLinux kana Raspberry ndiri kungoedza kunzwisisa chimwe chinhu, ndingafarire kana iwe uchikwanisa kunditumira chero mhinduro kana rubatsiro, mu kufambira mberi Ndatenda zvikuru
Ini ndakafanana newe sezvo raspbian haigone kuona netflix
Ini ndawana nzira iri nyore yekutamisa Netflix paRaspberri Pi. Ini ndinobatanidza iyi link kune blog.
Orlando gutierrez akadaro
ndinotenda kwazvo, nzira yekutanga inoshanda zvakanakisa
nyore kuisa uye inoshanda chaizvo
Pindura Orlando Gutierrez
Ndokumbirawo kuti iwe ugone kuratidza yekugadzirisa nzira yeiyo nzira 3 faira?
Zvingave zvakanaka kana iwe ukagadzirisa iyo ruzivo sezvo kunyangwe kukwazisa kuchishanda
Pindura kuna jaume
Zvinotaridza kuti kuwedzeredza kwaguma kuvapo.
Tamba yako Nintendo Chinja neruoko rumwe chete kutenda kune iyi adapta